Dhukaasa Filooriidaa: FBI fi barsiisoonni waa'ee Nikoolaas akeekachiisanii turan - BBC News Afaan Oromoo
Dhukaasa Filooriidaa: FBI fi barsiisoonni waa'ee Nikoolaas akeekachiisanii turan
Nikolaaz Kruuz ajjeechaa itti yaadamuun raawwatame 17n himatame.
Nikoolaas Kiruuz Nikolas, dargaggeessi gana 19 kan ta'e osoo qawwee isaa gatee osoo hin baqatiin dura, akkuma mooraa mana barumsaa seeneen barattootatti dhukaasuu jalqabe, jedha ragaan mana murtii irraa argame.
Itti yaadee namoota 17 ajjeesuun himatamee mana murtiitti dhiyaate.
FBI waa'ee shakkamaa kanaa akka odeeffannoo fudhatee ture amaneera.
Erga bara 2012 Konnektikeet keessatti namoonni 26 dhumanii dhukaasa mana barumsaa keessatti banamuun lubbuu namaa galaafate isa cimaadha.
Kiruuz akka jedhutti qawwee AR-15 qabatee mooraa mana barumsaa seenuun barattoota arge hunda mooraa kessa jiranirratti dhukaasa bane.
FBI waa'ee akkaataa qabannaa akeekkachiisa dargaggeessa Roobii darbe mana barumsaa Filooriidaatti argamutti dhukaasa banuun shakkamu irraa dursee ture itti qabatu xiinxaluu jalqabeera.
Nikoolaas Kiruuz, dargaggeessi ganna 19 ta'e kun ajjeechaa duraan itti qophaa'ameen himatamee mana murtiitti dhiyaateera. Namoota 17 ajjeesuudhaan kun erga dhukaasa mana barumsaatti bara 2012 tii Ameerikaatti turee isa jalqabaati.
Kiruuz YouTube irratti akka bara darbe yaada isaa maxxanseen "ogeessa dhukaasaa mana barumsaa" ta'uun barbaada jedhe.
FBI namni kun waan waan maxxanse sanaan aanga'ootaaf akeekkachiisa akka kenne amaneera.
Barsiisonnis Kiruuz namni borsaa-dugdaa baadhatee mana barumsaa seenuun hin eyyamamneefii akeekkachiifamaniiru.
FBI yaada YouTube irra ture sana qorateera garuu eenyu akka maxxanse guutummaatti adda baafachuu hin dandeenye.
Roobiirra, manni barumsaa naannoo akka tiwiiteriitiin ibsetti, "barattoonniifi hojjetoonni mana barumsaa dhukaasa waan fakkaatu dhaga'an", kun gara galgalaa Mana Barumsaa 'Marjory Stoneman Douglas' keessatti ture.
Gaafa Kamisaa, Kiruuz warra yakka qoratanitti dhukaasa sana raawwachuu isaa himee, borsaa-dugdaa meeshaa guutuu qabus akka qabu dubbateera.
Namoonni kumaatama ta'an isaan balaa ajjeechaatiin miidhamaniif shaamaa ibsuun kanjasaanii agarsiisan.
Gadda isatti dhaga'ame ibsuun Pirezedaantiin Ameerikaa Doonaaldi Tiraampi Paarkilaandiin "daawwachuudhaaf karoorfataa jira" jedhan.
Akeekkachiifni turan maal?
Yaada Kiruuz bara darbe YouTube irratti maxxanse arganii, fayyadamaan Ben Bennight jedhamu FBI bira deemee bakka bu'oota waliin daqiiqaa 20 itti dubbateera.
Bennight akka jedhutti dhukaasa mana barumsaa Paarkilaandi kanaa boodas deebiyanii isa qunnamaniiru.
FBI Kamisa darbe akka mirkaneeffatetti akka yaada sana hubatan taasifamaniiru qulqulleeffachuufis yaalaniiru garuu nama kana duuba jiru adda baafachuu hin dandeenye.
Barsiisaa Herregaa kan ta'an Jim Gard akka gaazexaa Miami Herald tti himanittis, bulchitoonni mana barumsaa waa'ee amala Kiruuz barsiisotaaf ergaa iimeeliin erganiiruuf jedhan.
"Bara darbe akka inni borsaa-dugdaa baadhatee mooraa seenuun hin eyyamamneef nutti himamee ture," jechuun Grad Miami Heral 'tti hime.
"Rakkoon isaa bara darbee barattoota sodaachisuu ture, kanaafis akka ani yaadutti mooraa akka gadi-dhiisu taasifame."
Kiruuz mana barumsaatii ari'amuun isaa ifa miti. Hiriyyaa isaa mana barumsaa duraanii kan ture Joshuwaa Charoo akka jedhutti Kiruuz rasaasa borsaa-dugdaa isaa keessatti osoo baatuu argameera.
"Ani rifadheera jechuu hin danda'u," jechuun erga dhukaasichaan booda dubbata Charoon.
Madda suuraa, AFP/ GETTY IMAGES
Barattoonni 3000 yeroo haleellaa sana dhaga'an hunduu guyyaa isaanii dhumaa itti fakkaatee ture.
Barattoonni keenya yaada sana deebisanii dhageessisanii turan. "Hunduu tilmaamee ture," jechuun namni tokko WFOR tti himee ture.
Poolisiin garuu halleellaan Kiruuziin raawwatamuu mala kan jedhu akeekkachiifni isaan hin geenye.
Ibsa namoota 17 miidhamanii ba'aa jira.
Gargaaraa leenjisaan kubbaa miilaa mana barumsaa Aaron Feis barattoota fuulduratti ba'e rasaasa irraa oolchuudhaaf rukkutamuun hospitaala ga'ee du'e. Gareen isaas tiwuuteriidhaan akka jedhanitti "akka gootaatti du'e".
Chris Hixon, daarektera atileetikisii mana barumsichaa kan ta'es akka du'e mirkanaa'eera.
Barsiisaa Iskoot Be'igeel karra cufuuf osoo jedhaa jiruu akka ajjeefame, barataan tokko Good Morning America ttii himeera.
Madda suuraa, Handout
Nikoolaas Kiruuz barataa duraanii Mana Barumsaa Sadarkaa Ol aanaa Marjory Stoneman Douglas ture
Namoonni maal jedhaa jiru?
Kamisa Waayiti Hawusitti akka dubbataniin, Obbo Tiraampi "maatiin hunduu, barsiisonniifi ijoolleen miidhaman akka jajjabaataniif aanga'oonni isin jajjebeessuuf waan gochuu dandeenyu taasifna" jedhan.
"Kophaa keessan akka hin taane akka beekan nan barbaada," jedhan Pirezedaantichi. Itti dabaluunis, "Manneen barnootaa Ameerikaa keessatti ijoolleen kamiyyu balaaf saaxilamuu hin qaban."
"Bulchitoota naannoo waliin taanee dhimma rakkoo cimaa fayyaa samuu irratti hojjechuuf of kennineera," jedhan.
Senaaterri Filooriidaa Maarkoo Ruubiyoo akka tiwiiteriirratti jedhaniin dhukaasichi "dhumaatii lubbuu hedduu qaqqabsiisuuf qophaa'amee kan hojjetamedha".
Garuu seerri cimaan qawwee qabachuu ittisu dhaabuu danda'aa kan jedhurratti falmuudhaaf kan ariifate fakkaata.
"Osoo gara seera baasuutti hin fiigiin dura rakkoo akkas mudatan kanaaf sababiin maal kan jedhu ilaaluuti barbaachisa," jechuun Fox News tti himan.
Ajeechaa Teksaas: Abbaan qawwee bara 2012'tti 'hosipitaala dhukkubsattoota sammuutii miliqe'
Ajjeechaa Laas Veegaas: 'Qawwee ariitiin dhukaasu irratti' seerri dabalataa haaraan gaafatame